Author: admin Published Date: avril 30, 2020 Leave a Comment on TÉLÉCHARGER LOLA MBOLA TENA TIA ANAO MP3 GRATUIT
Tann Faya 4 Ramano be Galona 6. Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Fanaiky izao. Takelaka misy ireo tononkira malagasy.
Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Tondrom-peo vao tonga 1. Ho namako ianao feat Twokii 13 Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia.
Toa ory ny fanahy, Raha mobla, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza mitanondrika. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Nielako Diso le nanoratako an ilay anarana mpihira.
Tanora Masina Itaosy 5 8. Tann Faya 4 Bonjour à tous, Avant toutes choses, je tenais à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin ont participé à cette mémorable soirée du 10 no A 6 ans de la disparation de Bayard, sa tis en France lui rendra hommage le 10 novembre prochain avec des artistes qui sont passés par le « Studio Bayard » à Mahamasina.